Ulahlwe ngelakubo 'obebamba imoto yemali' - Ilanga News
Home Izindaba Ulahlwe ngelakubo ‘obebamba imoto yemali’
Ulahlwe ngelakubo ‘obebamba imoto yemali’
Kubikwa ukuthi usale enkundleni, kwalimala nabebesedolobheni
ULAHLWE ngelakubo owesilisa okuthiwa ngowaseSikhaleni, eMpangeni odu-tshulwe ngonogada bemoto ethwala imali ngesikhathi yena nozakwabo
ZIHLANGANE nezi-mbila zithutha, ziho-lwa ngemhlophe phambili izigila-mkhuba ebezizama ukubamba imoto ya-kwaG4S ethwala imali edolobheni la-KwaNongoma, ngoMsombuluko emuva kokuba zitholane phezulu nonogada kwasala esisodwa enku-ndleni.
Ngokomthombo weLANGA ozibonele lesi sigameko, uthi bekungathi kuqoshwa ifilimu. Uthi kubukeka sengathi imoto yemali ifike ivele isilindiwe njengoba kuthiwa iToyota Hilux okuphume kuyona izigila-mkhuba ibonakele ilokhu yehla ye-nyuka kuleli dolobha.
Kuthiwa kukhona enye encane okukholakala ukuthi ibihambisana neyabasolwa. Umthombo uthi ku-gcine sekutheleka nabantu abange-nacala ngamachaphazelo kulokhu kudubulana.
“Kuqhamuke unogada ephethe ibhokisi lemali, okuthe engakange-ni nasemnyango webhange (abebe-ya kulona) wathelekelwa ngamadoda amathathu amshaya ngemuva lesibhamu amlalisa phansi. Enza lokhu nje, kawaboni ukuthi naye usiphethe isibhamu njengoba ihe-mbe abeligqokile ubengalishuthe-kile ngaphakathi ebhulukweni.
“Kuthe uma elaliswa pha-nsi, wakhuluma ku-ova ngaso leso sikhathi, wazenza umuntu ocela uxolo. Kuphume ozakwabo bavala zonke izikhala. La madoda athe ephuma athola ukuthi aselindelwe ngezulu lezandla. Kwadutshulwa-na,” kusho umthombo.
Uthi izigilamkhuba zibaleke za-ngena phakathi kwabantu njengoba bekugcwele kuleli dolobha.
“Bekungathi kuqoshwa ifilimu. Ngemuva kwesigameko, sizwe ukuthi unogada lona oshaye enyameni kumsolwa ogcine eshonile wake waba yisosha.
“Okunye okubi wukuthi kugcine sekulimala kabi abantu njengoba kunabesifazane nowesilisa abagci-ne sebephuthunyiswa esibhedlela. Kulimale netekisi njengoba omunye wabasolwa ubezama ukucasha ngayo,” kusho umthombo.
ILANGA lithole ukuthi umufi ngu-Mnu Omega Dladla waseSikhaleni (eSikhawini) eMpangeni.
UMnu Thomas Mncube oyilungu lomndeni kamufi, uthe akukho azo-kuphawula ngalolu daba ngoba ka-luhlangene naleli phephandaba.
“Ngeke ngikhulume nomuntu engingamazi naye futhi ongangazi. Ngikhuluma nje kumanje (ngoLwe-sibili) silapha KwaNongoma sizo-hlangana nomphenyi wecala. Engi-ngasho nje wukuthi thina sithole umbiko wokuthi ubafo udutshuliwe,” kusho uMnu Mncube.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhe-le, uthe kuvulwe amacala amabili aphenywa esiteshini samaphoyisa aKwaNongoma, okungelokubamba inkunzi nelokufa komuntu.
Uthe abasolwa abebehlomile ba-bambe unogada obephethe isi-khwama semali, umshayeli wemoto yonogada wavulela ngenhlamvu. “Kusale oyedwa endaweni yesiga-meko,” kusho uCol Mbhele.
Previous articleUShenge ukhumbule uMnu Kaunda ngolokuzalwa
Next articleUvalo kulaxazwa ibhokisi lomshado